Mon Mon's Diary: ဒုတိယ ကလေး မမွေးခင် ကုန်ကျစရိတ် နှင့် မွေးပြီး ကုန်ကျစရိတ်
at 6:01 PM Posted by Myo Mon Yee Oo
Khin Maung Oo said...
တို့လဲ မွန့်၂လိုပဲ ခံစားနေရတယ် ။ လိုလဲ သိပ်မလိုချင်တော့ စစ်မကြည့်ဖြစ်သေးဘူး ။
ဟယ် ယောကျားအီးမေးဖွင့်ထားလို့ သူ့နာမည်ကြီးနဲ့ဝင်သွားတယ် ။ မယ်သံ ပါ ။
It is ok, sis. No prob. I will write new post again :)